Knowledge Archives - Page2of 22 - Lucky9
ညောငျးညာကိုကျခဲပွီး ဝမျးမမှနျလြှငျ …
July 22, 2020 Thi Ha 0
ညောငျးညာ ကိုကျခဲခွငျး အတှကျ နှငျ့ ဝမျးမှနျစဖေို့ အတှကျ အစှမျးထကျသညျ့ ရှောကျတဈလုံး ဆေးဖျေါနညျး “ညောငျညာကိုကျခဲအတှကျ ရှောကျတဈလုံး ဝမျးမှနျဆေး ” ပွုလုပျပုံအဆငျ့ဆငျ့ ပထမဆုံးရှောကျသီးကိုရေ သခြောဆေးပါ.. ရအေနညျးငယျနဲ့ရှောကျသီးကိုပွုတျပါ.. ရခေမျးသှားတိုငျးရအေနညျးငယျထညျ့ပွီးလငျြ ဆကျလကျပွုတျပါ.. တခါထဲရအေမြားကွီးမထညျ့ပါနဲ့.. ရှောကျသီးနူးလာတဲ့ထိပွုတျပါ.. ထနျးလြှကျဆယျ့ငါးကပျြသားကိုသပျသပျစီ ကွိုထားပွီးစဈထားပါ.. ရှောကျသီင်္း အခှံပါနူးအိလာတဲ့အခါ […]
“သဈတံခါးဆရာတျောကွီး၏ ဝါတှငျး(၃)လ ရကျပေါငျး (၉၀) အဓိဌာနျပုတီးစိပျနညျး”
ဒုတိယ ဝါဆိုလပွညျ့နေ့ (ဓမ်မစကွာနမှေ့ သီတငျးကြှတျလပွညျ့နေ့) အထိ ရကျပေါငျး( ၉၀ ) ဒုတိယ ဝါဆိုလပွညျ့နေ့ (ဓမ်မစကွာနမှေ့ သီတငျးကြှတျလပွညျ့နေ့) အထိ ရကျပေါငျး (၉၀) တိတိ စိပျရပါမယျရှငျ သကျသတျလှတျလညျး စားစရာမလိုပါဘူးရှငျ စားနိုငျသူကတော့ ပိုထူးခွားပါတယျနျော အခြိနျလညျးတိတိကကြစြိပျစရာမလိုပါဘူးနျောနတေို့ငျးမှနျမှနျစိပျနဖေို့ပဲလိုပါတယျရှငျ့ပုတီးစိပျရမယျ့နရေ့ကျမြား 3.. 8 . […]
လူပေါင်း (၁)ထောင်ကျော်နဲ့ အချိန်ယူပြီး ဖျက်စီးတာတောင် မပျက်စီးသွားတဲ့ အံ့ဖွယ်ဘုရားကျောင်း . . . .
July 21, 2020 Thi Ha 0
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ထူးထူးဆန်းဆန်း အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုအကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျောက်တုံးကြီး တစ်တုံးကို မှ ထုခွဲပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဘုရားကျောင်းတစ်ခု အကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုး ထုခွဲတည်ဆောက်ထားလဲဆိုတာကတော့ ဆက်ပြီး လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်… The Kailasa လို့ အမည်ရတဲ့ ဘုရားကျောင်းဟာဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ […]
“ပုံမှနျ ဝငျငှရှေိပွီး လကျထဲမှာ ပိုကျဆံ မစုမိသူမြားအတှကျပိုကျဆံစုတဲ့နညျးဗြူဟာ”
“ပုံမှနျ ဝငျငှရှေိပွီး လကျထဲမှာ ပိုကျဆံ မစုမိသူမြားအတှကျပိုကျဆံစုတဲ့နညျးဗြူဟာ” ပိုကျဆံစုတယျဆိုတာရညျမှနျးခကျြတဈခုထားပွီး ရရှေညျ တညျဆောကျထားသငျ့တဲ့အလအေ့ကငျြ့တဈခုဖွဈပါတယျ ။ငှကွေေးအောငျမွငျမှုမှာပိုကျဆံ ဘယျလောကျဝငျတယျဆိုတာထကျဘယျလောကျစုနိုငျတယျဆိုတာကပိုအ ရေးကွီးပါတယျ ။ လူတှကေမဝငျသေးတဲ့ ပိုကျဆံကို မြှျောကိုးပွီးအကွှေးယူတတျကွတယျ ။ဒါကအဓိကမှားယှငျးနတေဲ့ အခကျြပဲ။ ကြှနျတျောတို့တှပေိုကျဆံစုနတေဲ့အခြိနျမှာဘယျလိုဗြူဟာတှေ သုံးရမလဲဆိုတာ အခကျြကကြ တငျပွခငျြပါတယျ။ ၁။ သုံးပွီးမှ မစုလနေဲ့ လစာထုတျတာနဲ့လိုခငျြတဲ့ပစ်စညျးတှကေိုဝယျပွီးမှပိုကျဆံစုတတျကွတယျ […]
သားဦး သားနှောင်း မယူကောင်း ယူကောင်း၊
July 19, 2020 Thi Ha 0
သားဦး သားနှောင်း မယူကောင်း ယူကောင်း (လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုမယ့် မြန်မာ အမျိုးကောင်း သားသမီးများအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ) ”ဦးဇော်ရှိသလားဗျို့” အော်ဟစ် အသံပေး၍ ဝင်ရောက်လာသူမှာ မောင်သန့်ဇင်ထွန်းဖြစ်သည်။ ”သြော်… မောင်သန့် ဇင်ထွန်း ပါလား။ အိမ်ကို အလည်မလာတာတောင် အတော်ကြာသွားပြီနော်။ ဒါနဲ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရော အဆင်ပြေ […]
ဇက်ကြောတက်သူများအတွက် ဆင်ခြင်စရာများ အကြောတက်ရောဂါ အမျိုးမျိုးတွင် ဇက်ကြော တက်ခြင်း၊ နောက်ကြော တက်ခြင်း၊ ခြေသလုံးနှင့် ပေါင်ကြောများ တက်ခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း စသည်ဖြင့် အမျိုးပေါင်းများစွာ ရှိပါသည် ။ အကြောတက်ခြင်း အမျိုးမျိုးသည် လူ၏ ခန္ဓာဗေဒအရ တည်ဆောက်ထားသော အရိုးများ လှုပ်ရှားမှုကို တွယ်ဆက် ထောက်ကန် […]
ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ဂဠုန်ဦးစော အခြေအတင်စကားများခဲ့ကြပုံ…. (၅) မိနစ်အချိန်လေးပေးပြီးဖတ်ကြည့်ပါ
ဂဠုန်ဦးစောကား နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်အလိုတော်ရိကြီး ဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးကိုချစ်သည့် ၊ နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်လိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ် ။ အာဏာကုလားထိုင် မြင့်မြင့်ကိုသာ တက်ချင်သူဖြစ်၏ ။ သူက ရက်စက်၏ ။ ကြမ်းကြုတ်ခက်ထန်၏ ။ အငြိုးအတေးကြီး၏ ။သူ နန်းရင်းဝန်ဖြစ်စဉ်က ကြည့်ပါ ။ နယ်ချဲ့လက်အောက်ကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေကြသော တို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင်များကို […]
လူသိနည်းပြီး သတိမမူကြတဲ့ တံမြက်စည်း နိမိတ်..
July 18, 2020 Thi Ha 0
လူသိနည်းပြီး သတိမမူကြတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ် ၁။ အပျိုတွေ တံမြက်စည်း ကျော်မိရင် အိမ်ထောင်မကျခင် ဗိုက်ကြီးတတ်ပါတယ်။ ၂။ အပျို၊ လူပျိုတွေ ခြေဖျား‌ပေါ်ကျော်ပြီး တံမြက်စည်း ခတ်မိရင် အဲ့ကလေးတွေ အိမ်ထောင်မကျတော့ပါဘူး။ တံမြက်စည်းကို တံတွေးနဲ့ ပြန်ထွေးခိုင်းပါ။ ၃။ အိမ်နီး ခြံနီးချင်းတွေ ကိုယ့် အိမ်/ခြံဝကစပြီး […]
ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် လက်ထပ်ဖို့ လုံးဝ လုံးဝ မရွေးချယ်သင့်တဲ့ လူ (၄) မျိုး
တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်မှာ နေရ နေရ ဆိုတဲ့ ခေတ်ကြီးက ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ အချစ်တစ်မျက်နှာပဲ ကြည့်ပြီး တစ်ဘဝလုံး စိတ်မချမ်းမြေ့စေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးကို ရမှာမျိုးက လက်တွေ့မှာ အဆင်ပြေမနေပါဘူး။ ဒါကြောင့် လက်မထပ်ခင်မှာ သေချာ စဉ်းစားသင့်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်မထပ်ခင် စဉ်းစားတဲ့အချက်ထဲမှာ အခုလို လူမျိုးတွေဆိုရင် ပိုပြီးတောင် […]
ဘုရားရှိခိုး မပငျြးနဲ့ (ဘုရားရှိခိုး ပူဇျောရသော အကြိုး ရှဈမြိုး )
July 17, 2020 Thi Ha 0
ဘုရားရှိခိုး မပငျြးနဲ့ အခြိနျဖွုနျးတဲ့ အလုပျ မဟုတျဘူး တဈနလေုံ့းသုံးဖို့ စိတျတနျခိုး ထုတျလုပျတာ စိတျ ဓါတျဆီ ထညျ့တာ စိတျ စကျ ဆီ ဖွညျ့တာ။ သနျ့စငျတဲ့ စိတျဖွဈအောငျ ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးတှကေို ရနေဲ့ ဆေးတယျလို့မှတျ စကျကရိယာတှကေို ဆေးကွောသနျ့စငျတယျလို့ စိတျထဲ မှာ […]
အဆိုတော်ယုန်လေး အနုပညာလှုပ်ရှားခွင့် (၁)နှစ်ပိတ်ပင်ခံရ …
အမိုကျစားရိုကျ ထားတဲ့ နနျးသီရိမောငျ ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ လေး